अनमोललाई निर्देशन चाहन्छन् सुदर्शन ?
प्रकाशित : बुधबार, असार १८, २०७६१९:०२
फिल्म । नेपाली फिल्मका पपुलर स्टार अनमोल केसी फिल्म रिलिजको समयमा मात्र मिडियामा देखिने गर्छन् । त्यसपछि उनि कहाँ के गर्दैछन भन्ने जानकारी उनका नजिकका व्यक्तिबाट लिनु पर्छ । यतिबेला ‘ए मेरो हजुर ३’ रिलिजपछि अनमोल नयाँ स्टोरीको सेलेक्सनमा व्यस्त छन् । तर , उनले कुन फिल्म गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन , अर्थात् अनमोल स्क्रिप्टकै छनौटमा छन् ।
उनले पछिल्लो समय मिडिया साक्षात्कारको क्रममा आफुले काम गर्न चाहेको निर्देशकको लिस्टमा सुदर्शन थापाको पनि नाम लिएका थिए । यसले गर्दा सुदर्शनलाई अनमोल कहाँ पुग्न सजिलो पनि भयो । सजिलो यस अर्थमा कि अनमोल आफैले सुदर्शनको ‘लभ स्टोरी’ फिल्म मेकिङ्गको प्रसंसा गरे । यसैले गर्दा पनि हुन् सक्छ निर्देशक थापाले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को दोस्रो भागमा अनमोललाई अफर गरेका छन् ।
पहिलो भागमा रहेका पल शाह दोहोरिएलान् भन्ने कमैलाई लागेको छ । किनकी पूजा शर्मासँग सुदर्शनले लगातार फिल्म गरिरहे पनि पल शाहसँग बीचमा उनको मनमुटाव भएको थियो । सुदर्शनको प्रस्तावमा अनमोलले के जवाफ दिए अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । अनमोलले राम्रो स्क्रिृप्ट भएमा सुदर्शनसँग काम गर्न इच्छुक भएको धेरैचोटि बताइसकेका छन् । तर, विविध कारणले दुबैको सहकार्य जम्न सकेको छैन । कतै ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’मा यो संयोग जुर्ने त होइन ? त्यसो त सुदर्शनले क्याप्टेनको छायांकनको समयमा पनि एउटा फिल्मको लागि भेटघाटमा थिए । कतै त्यो ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ नै त होइन ?
‘कुली नम्बर वान’ मा वरुणको जोडी सारा